I-Redwood Lodge ibekwe phakathi kweShropshire Hills
Relax kulo mgangatho mnye, iRedwood Scandinavian Chalet ibekwe phakathi kweShropshire Hills. Kufuphi nezinto ezininzi ezinomtsalane kunye nemisebenzi yangaphandle.
Hamba ngqo kwindlela yaseShropshire. Sihamba malunga nemizuzu eli-10 ukusuka kwi-horseshoes pub emi-3 kunye ne-5 min ukuya kwi-Boyne Arms e-Burwarton.
Relax kwibalcony uthatha umbono ophefumlayo weBrown Clee kunye nehlathi lepine. Ikwajonge nedama lethu elilikhaya kwingqokelela yethu ye-Koi carp kwaye ngamanye amaxesha i-otter endwendwelayo!
Indawo yokuhlala ibandakanya ikhitshi enkulu evulekileyo yokutyela kunye negumbi lokuhlala. Ikhitshi lixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba izitya, umpheki, ihob, imicrowave kunye nefriji. Kukho i-intshi ye-49 egobileyo ye-TV, i-DVD player, kunye ne-Xbox 360. I-WiFi ifakiwe, i-high speed satellite broadband. I-Sky TV ikwabandakanywa ne-Sky Cinema, i-Sky Sports ipakethe epheleleyo, ukuzonwabisa kwesibhakabhaka kunye nephakheji yaBantwana. Igumbi lokuhlala linefuthe lokwenyani umlilo wombane unika intuthuzelo eyongezelelweyo ebusika.
Kukho igumbi elinye lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye nelinye elineebhedi ezininzi. Igumbi lokuhlambela lineshawa kunye nebhafu kunye nentsimbi yetawuli eshushu. Kukwakho nendawo encinci eluncedo yokuxhoma iidyasi kunye nokugcina iibhutsi. Umatshini wokuhlamba kunye nefriji.
Indawo yokuhlala inobushushu obuphakathi kulo lonke.
Umbane, ilinen yebhedi kunye neetawuli zonke zibandakanyiwe.
Wamkelekile ipakethe xa ufika.
Kukho indawo yokupaka eyaneleyo kunye ne-bbq yegesi inikezelwe.
Simalunga neemayile ezi-5.5 ukusuka kwidolophu yakudala eyimbali yaseLudlow. Oku kuqhayisa ngebala lomdyarho, iNqaba yenkulungwane ye-13, iziko lokutya elidumileyo elibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokunkcenkceshela ukutya okuveliswa ekuhlaleni. Inezakhiwo ezimangalisayo, iimarike zesitrato, iivenkile zamandulo kunye neendawo zokutyela ezineenkwenkwezi zaseMichelin.
Ezinye izinto ezinomtsalane zalapha ekhaya zibandakanya imbali yaseBridgnorth malunga neekhilomitha ezili-10 kude. I-Long Mynd Hills, iStiperstones kunye neWenlock edge zonke ziyiparadesi yabahambi.
I-Much Wenlock, iChurh Stretton (eyaziwa njengeSwitzerland encinci), iLeominster, iHereford, i-Ironbridge kunye ne-Shrewsbury zonke zikumgama weemayile ezingama-25.
Izinto ezikufutshane zibandakanya iNqaba yaseStokesay, iNqaba yaseCroft, iBerrington Hall, iSevern Valley kaloliwe kunye neWest Midlands Safari Park.
Siyiholide yosapho evumela izizukulwana ezi-2 zosapho ezihlala kufutshane, ke kukho umntu osoloko ekhona oza kuphendula imibuzo yakho.